चिकारु मामा | Kamsastra
Sex, चिकारु मामा, नेपाली यौन कथा,
आज म पनि कामशास्त्रमा केही लेख्ने उदेश्यले उपस्थित भएको छु । शायद ठाउँ दिनुहुन्छ भन्ने उदेश्यले मेरो आफ्नै कथा लिएर आएको छु । त्यस ताका म १८ बर्षको थिए । दिदी भेना सँग झगडा गरेर घर आउनु भएको थियो, घरमा म र हजुरआमा बस्थिऔ । अब दिदी र काखको भन्जी पनि थपिए । चार प्राणी भयौ, यसरी नै दिनहरु बित्न थाल्यो । पहाडको बजार, बजार जानु परे बिहानै लाग्नु पर्थो । बजार हजुरी बिहानै लाग्नु भयो । गाई बस्तुलाई घासपात गरेर बस्यौ । दिदी र म पनि १० बजे तिर खाना खाएर । दिदी भान्जीलाई दुध खुवाउन थाल्नु भयो । म पनि केही बेर आरम गर्ने उदेश्यले तला माथि उक्ले र खाटमा पल्टे १५ -२० मिनेट पछी दिदी पनि मेरो कोठामा छिर्नु भयो ।
मेरो कोठामा साथी बाहेक, कोही नछिर्ने भएको ले मैले अर्धनग्न तस्बिरहरु टासेको थिए । दिदिले त तस्बिर हेरेर कत्रो, कत्रो दुध भएको केटीहरु को तस्बिर टासेको भन्नु भयो । दिदिको फाचो पनि त्यो भन्दा कम थिएन । मलाई कता कता करेन्ट लाग्यो । अनी दिदिले मलाई निम्तो दिए जस्तो लाग्यो । मैले पनि पुतिको स्वाद लिसकेको थिए । म पनि भोको बाघ झै झम्टिए दिदीको दुधको फाचो तिर दिदी पनि त्यही चाहन थिइन शायद म तिर नै ज्यान छाडिन र अनी मेरो हात सकृय भए कुनै मिसिन झै दुधको पोकामा दिदीले आँखा चिम्म गर्नु भयो । दिदिको श्वास प्रश्वास जोड जोडले चल्दै थियो किन कि मेरो हात तल माथि हुँदै थियो । केही क्षण पश्चात, भान्जी सुताएर आउछु भन्दै मेक्सी मिलाउदै, भर्र्याङ् झरिन । त्यती बेला सम्म मेरो सामान फुलेर गोमन सर्प झै भइसकेको थियो ।
के थाहा आउने हो कि हैन । म आफुलाई शान्त बनाउन चाहन्थे । आफैले हस्त मैथुन गर्न थाले । जोड जोडले अह्ह...अह्ह...अह्ह...अह्ह...अह्ह... मेरो केही क्षणको प्रयासले अब मेरो लिङले पिच्कारी फाक्यो अब म शिथिल भएर ओछायानमा ढले । कोठामा चकमन्न छायो । केही क्षण पश्चात कोही भर्र्याङ् उक्लेको आवाज आयो । किन कि साथीहरु सँग त बेलुका मात्रै भेटघट हुन्थियो । सबै मेलापात तिर गएको छन । मलाई शकां लाग्यो , दिदी नै हुनु पर्छ त्यसैले निदाएको नाटक गरे । दिदी आएर मलाई बोलाँउदै भन्नु थाल्नु भयो । फटाहा त्यस्तो गर्नु हुँदैन "पाप लाग्छ " म अझै सुतेको जस्तै नाटक गर्दै थिए । मन मनै म सराप्दै थिए पाप लाग्ने भए किन आएको त ? दिदी पनि मलाई सुम्सुम्याउदै के के भन्न् थालनु भयो शायद दिदीलाई पनि चाहना थियो होला तर मैले कसरी सोधने पुन मेरो मनमा आक्रमण गर्ने बिचार आयो । आकाशमत पुन म दिदी लाई आङलोमा बेरे फेरी दिदिले त्यही पहिलाको सम्बाद दोहराउन थालनु भयो । पाप लाग्छ दिदी भाईले यस्तो गर्नुहुदैन तर म सुन्नेवाला कहाँ थिए । म त लगाम बिनाको घोडा भएको थिए । म कसैलाई भन्दिन भने पछी मात्र उहा तयार हुनु भयो । उहाको मन्द सहमतीमा, ओछायानमा धल्काए र म दिदिको मेक्सी सुरकाउन थाले । दिदीले पेन्टी पनि लगाउनु भएको रहेन छ । दिदिको पुति भुक्के पाउरोटी झै रहेछ र स-साना भुत्ला सुम्सुम्याउन थाले । पुती पनि रसाइ सकेको रहेछ अली अली रौ हरु भिजेका थिए । मेरो लाडो पनि अब ९० डिग्रीमा खडा भई सकेको थियो । हतार हतार मेरो लुगा खोले दिदीले मेरो लाडो देखेर आतिनु भयो कत्रो लाडो रहेछ । भेनाको भन्दा पनि ठुलो भन्दै थुक निलिन । दिदिले मुख दुइटा हातले छोप्नु भयो । मैले ईशारा बुझे किन कि उहा लाई हतार भई सके छ । मलाई बेसरी अङालोमा कसेर मेरो लाडो सुम्सुयाउन थाल्नु भयो । म पनि के कम मुखले दुध चुस्दै, मेरो औंला रसाएको पुतिमा भित्र बाहिर गर्न थाले । उहाको आँखा अझै बन्द थियो । अनुहार उतेजित थियो म मक्ख थिए पुती चिक्न पाएकोमा, अब म तयार हुँदै थिए मेरो लाडो पसाउन पुतिमा एउटा हातले लाडो समाएर पुतिको डिलमा लगेर धक्का दिए । अलिक पसे जस्तो लागेन त्यसैले आसन बद्ले दिदिको खुट्टा दुबै मेरो काधमा हाले र मेरो लिङ्ग लाई पुतिको दुलोमा ग्वाम्मै हाले शायद पिडाले होला दिदी चिच्याउनु भयो । अझ मैले दनादन दिन थाले शायद उतेजनाले होला मलाई साथ दिन थाल्नु भयो । आनन्ददायी आवाज आउँदै थियो प्वाक ....प्वाक ....प्वाक ....प्वाक.... अहा.....अहा.....अहा.....अहा.....अहा..... अह्ह...अह्ह...अह्ह...अह्ह...अह्ह... दिदी भन्दै थिन के हो सिपालु रहेछौनी त पुती चिक्नमा त ? पहिला पनि चिकेको थियौ कि क्या हो ? मैले पनि लजाउदै भनी दिए पहिला हाम्रो घरमा काम गर्ने केटीले सिकएको भनेर, अब किन लजाको मेरो पुती चिकेर न लजा, लाज मन्नु पर्दैन । तेरो स्वास्नी धेरै भाग्यमानी हुन्छ । गजबको चिक्दो रहेछस । म झन लिङे पिङ झै मचिन थाले । मेरो लाडो अझ फुलिदै थियो । दिदी चिचाउदै थिन अझै जोड्ले गर अझै अहा.....अहा.....अहा.....अहा.....अहा..... मेरो लाडोले पिच्कारी हान्यो । पुती लपक्कै भिज्यो । म काटेको रुख झै ढले दिदिको शरीर माथि दिदिले मलाई मेरो राजा भन्दै सुम्सुम्याउदै, बेस्सरी अङालो मा कस्नु भयो र भन्नु थाल्नु भयो बल्ल मर्दको फेला परिए छ । मेरो २५ बर्ष देखी को प्यास मेटाइ दिएउ ।
अब त हामीलाई कती बेला मौका मिल्छ र चिकामारी खेल्ने भन्ने पिर लाग्न थाल्यो । कहिले दिउसै जङलमा त कहिले राती गोठमा हाम्रो चिकामारी चल्न थाल्यो । यसरी नै दिदीभाईको चिकामारी खेल चल्यो एक महिना सम्म, एक दिन अचानक भेना आएर दिदिलाई घर लिएर गए । मेरो प्राण प्यारी दिदिको पुती पनि म देखी टाढा भयो । अब म अर्को पुतिको खोजिमा लाग्न थाले । प्रिय पाठकहरु मेरो अर्को लेख आगमी अंकमा लिएर आउने छु । प्रतिकृया लेख्न नभुल्नु होला । चिकारु मामा
Labels: Sex, चिकारु मामा, नेपाली यौन कथा